» अर्चना स्याङ्तानको ‘मकवानपुरे ठिटो’ चर्चामा
अर्चना स्याङ्तानको ‘मकवानपुरे ठिटो’ चर्चामा
६ असार २०७६, शुक्रबार १०:११
हेटौँडा, ६ असार । मकवानपुरका विभिन्न चर्चित पर्यटकीयस्थलहरुको नाम र त्यहाँका विशेषताहरु समेत समेटेर तयार पारिएको नेपाली लोक गीत ‘मकवानपुरे ठिटो’ चर्चामा छ । नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत संगीतको क्षेत्रमा पश्चिमी सुगन्ध मिश्रण भएको आरोप लागिरहेको समयमा मकवानपुरे युवा सर्जक छिरिङ दोर्जे लामाले आफ्नै कला सँस्कृति र मौलिकताको जगेर्ना गर्ने प्रयास गर्दै प्रेम र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई गीतमार्फत एउटै मालामा उनेका छन् ।
गीतको म्यूजिक भिडियो समेत राम्रो बनेको छ । म्यूजिक भिडियोमा करिश्मा ढकाल, चन्द्र तामाङ, निर्मला मोक्तान र सुवाश तामाङले अभिनय गरेका छन् । गीतको म्यूजिक भिडियोलाई प्रविन थापाले निर्देशन र नमराज घिमिरेले छायाँकन गरेका हुन् । म्यूजिक भिडियोलाई शक्ति प्रज्वल घिमिरेले सम्पादन गरेका छन् । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा गीतको म्यूजिक भिडियोलाई करिब ४७ हजार पटक हेरिएको छ । गीतमा करिब ४ सय लाईक र १ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
हेटौँडाकी संगिताको ‘साँझको बेला’ यस्तो बन्यो
कवानपुर जिल्लाबाट कला क्षेत्रमा उदाउँदै गरेकी नवप्रतिभा संगिता आले मगरको ‘साँझको बेला’ कभर गीत सार्वजनिक भएको छ । हेटौँडामा कला क्षेत्रमा सक्रिय ओपेरा ईन्फोटेन्मेन्ट प्रालिले तयार पारेको भिडियोलाई प्रालिको युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । धन पाख्रिनको परिकल्पना तथा विक्रम लुङ्वाको निर्देशन तथा छायाँकनमा तयार भएको भिडियोलाई विक्रम आफैले सम्पादन गरेका छन् । म्यूजिक भिडियोमा संगिता आफैले अभिनय समेत गरेका छन् ।
‘साँझको बेला’ मा ओरिजिनिल आवाज तृष्णा गुरुङको रहेको छ । तृष्णा र हरकुल्स बस्नेतको शब्द तथा संगितमा तयार भएको गीतमा याङ्जीन लामा र प्रविन लिम्बुले अभिनय गरेका छन् । गीतको म्यूजिक भिडियोलाई बिजु कर्माचार्यले निर्देशन गरेका हुन् । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा ओरिजिनल गीतलाई ६४ लाख ९५ हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । गीतमा ३५ हजारभन्दा बढी लाईक करिब १ हजार ६ सय वटा कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
युट्युब ट्रेण्डिङ– ‘भद्रगोल, पराना र बसबस रे’ को घम्साघम्सी
केही दिनअघिसम्म नेपाली युट्युब ट्रेण्डिङमा भारतीय चलचित्र र भिडियोहरुको कब्जा रहेता पनि यो पटक भने युट्युब ट्रेण्डिङको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा नेपाली भाषाकै सामाग्रीहरुले कब्जा जमाएका छन् । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा युट्युब ट्रेण्डिङको पहिलो नम्बरमा नेपाली कमेडी टेलिसिरियल भद्रगोल, दोस्रो स्थानमा नेपाली कथानक चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ को ‘पराना’ बोलको गीत र तेस्रो नम्बरमा द कार्टुन्ज क्रियुको ‘बस–बस रे’ बोलको गीत पर्न सफल भएको छ ।
१) भद्रगोल–युट्युबमा भिडियो ट्रेण्डिङमा पार्न सहज नहुने अवस्थामा पनि नेपालकै एउटा टिभी सिरियलको हरेक एपिसोड हरेक हप्ता युट्युब ट्रेण्डिङमा पर्छ भन्ने सुन्दा तपाईँलाई अलि अनौठो लाग्ला । तर, यो वास्तविकता नै हो । यसबाट समेत उक्त टिभी सिरियल कति चर्चित छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । हजुर उक्त चर्चित टेलिसिरियल हो ‘भद्रगोल’ । बिगत ५ महिनाभन्दा पछिका मात्र एपिसोड हेर्ने हो भने ‘भद्रगोल’ का हरेक हप्ताका फरक एपिसोडहरु युट्युब ट्रेण्डिङमा पर्न सफल भएका छन् । भद्रगोलको होली स्पेशल एपिसोड यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा युट्युब ट्रेण्डिङको नम्बर १ मा छ । यो भिडियोलाई यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा १७ लाख १४ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ भने भिडियोमा १८ हजारभन्दा बढी लाईक गरिएका छन् । निकै नै चर्चामा रहेको यो टेलिसिरियललाई रामसार मिडियाले युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । मिडिया हबको निर्माणमा बनेको सिरियलका पात्रहरु समेत निकै नै चर्चित छन् । जेपिटि क्रियशन ब्यानरमा निर्माण हुँदै आएको सिरियलमा अर्जुन घिमिरे, कुमार कट्टेल, कमलमणि नेपाल, रक्षा श्रेष्ठ, मधुसुदन पाठक, अशोक धिताल, सागर लम्साल, हरि निरौला, गोबिन्द कोइराला, दिपक आचार्य लगायतका कलाकारहरुले दर्शकलाई पेट मिचिमिचि हाँस्न बाध्य बनाउँछन् । सिरियललाई कुमार कट्टेल र अर्जुन घिमिरेले लेख्ने गरेका छन् भने निर्देशन समेत उनीहरुले नै गर्ने गरेका छन् । निर्देशनमा दिपक आचार्यको समेत हात रहने गरेको छ । सागर खड्काले खिचेको सिरियलको शिर्ष गीत चर्चित गायक राजेश पायल राईले गाएका छन् भने संगीत राजेन्द्र श्रेष्ठको रहेको छ । सिरियलका जिग्री, पाँडे, जयन्ते लगायतका पात्रहरु निकै नै चर्चित छन् । हेरौँ बाँकी भिडियोमा-
२) पराना– नेपाली कथानक चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ को दोस्रो गीत बुढासुब्बा डिजिटलमार्फत शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो । ‘पराना’ बोलको गीत यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा युट्युब ट्रेण्डिङको दोस्रो नम्बरमा छ । गीतको भिडियोलाई १५ लाख ८० हजार पटकभन्दा बढी हेरिएको छ । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा गीतमा ५६ हजार लाईक, करिब ४ हजार डिसलाईक र करिब ६ हजार कमेन्टहरु गरिएका छन् । नायिका झरना थापा र निर्माता सुनिल कुमार थापाकी छोरी सुहाना थापाको डेब्यू चलचित्रको यस अघि नै पहिलो गीत र टिजर सार्वजनिक भइसकेको छ । गीतमा अनमोल केसी, सुहाना थापा र सलोन बस्नेत लगायतका कलाकारहरुलाई फिचरिङ गरिएको छ । आशिष अविरल र अञ्जु पन्तको आवाज रहेको गीतलाई आनन्द अधिकारीले लेखेका हुन् । गीतमा आशिष अविरलकै संगित र संगीत संयोजन छ । झरना थापाको निर्देशन र सुनिल कुमार थापाको निर्माणमा बनेको चलचित्रमा अनमोल, सुहाना र सलोनका साथमा अर्पण थापा, रबिन्द्र झा, रुपा घिसिङ, रक्षा गौतम, विशाल पहाडी, रेअर राई, सरोज खनाल लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । झरना थापा र सुमन पौडेलको कथा रहेको चलचित्रमा चेतन गुरुङ,बाबुराम दाहाल, सुमन पौडेल र प्रतिक पौडेलले स्क्रीन प्ले र डाईलग लेखेका छन् । उदयराज पौडेलको एरेन्जमा निर्माण गरिएको गीतहरुमा आशिष अविरल, कल्याण सिंह, कोशिष क्षेत्री, प्रतिक पौडेल र पुष्पन प्रधानको संगीत छ । हिमाल केसीको द्वन्द समावेश चलचित्रमा कविराज गहतराज, रामजी लामिछाने, प्रविण सिंह र राहुल शाहको कोरियोग्राफी हेर्न सकिन्छ । सैलेश श्रेष्ठको ब्याकग्राउण्ड स्कोर समावेश चलचित्रमा सत्यम राना र अच्यूत बजागाईले भिएफएक्स गरेका छन् ।
३) बस–बस रे– नेपालको लोकप्रिय डान्स समूह कार्टुन्ज क्रियुको नयाँ गीतको म्यूजिक भिडियो ‘बस–बस रे’ युट्युब ट्रेण्डिङको तेस्रो नम्बरमा छ । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा यस म्यूजिक भिडियोलाई ७ लाख ८७ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । एन्जिला रेग्मी र प्रताप दासको आवाज रहेको गीतमा डिपि खनालको शब्द र भिम बिसिको संगीत छ । उदयराज पौडेलले मिक्सिङ गरेको गीतको म्यूजिक भिडियोलाई ज्ञानेन्द्र शर्मा हुमागाईले खिचेका हुन् । सरोज अधिकारीको निर्देशन तथा परिकल्पनामा तयार भएको भिडियोलाई आश्मा विश्वकर्मा, सुविन चौहान र सरोजले नै कोरियोग्राफी गरेका छन् । म्यूजिक भिडियोमा क्रियुका सरोज अधिकारी, लाक्पा डि लामा, राम घले, सुबिन चौहान, साजन चौहान, पेम्बा मगर, ईश्वर श्रेष्ठ, आश्मा विश्वकर्मा, जेनिशा डंगोल, एलिशा तामाङ, रुबिना खड्गी र अस्मि भुजेलको अभिनय रहेको छ ।
नेपाली युट्युब ट्रेण्डिङमा हिन्दी सिरियलको कब्जा
नेपालमा घर–घरमा हिन्दी सिरियलहरु हेर्ने प्रथा अहिलेसम्म नै कायम छ । तर ईन्टरनेटको पहुँचसँगै यी सिरियलहरु टिभीमा हेर्नुको साटो भिडियो ब्लगिङ साईट युट्युबमा हेर्ने प्रचलन बढेको छ । कुनै समय नेपालमा भारतीय टिभी च्यानलको सिरियलकै कारण विशेष गरी नेपाली महिलाहरु डिप्रेसनको सिकार भएको समाचारहरु पनि छापिएका थिए । तर अहिले त्यस्तो खबर नआएता पनि नेपालमा हिन्दी सिरियलको क्रेज घटेको छैन भन्ने कुरालाई युट्युबमा हिन्दी सिरियलले पाउने भ्यूजका आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा नेपाली युट्युब च्यानलको एक नम्बर ट्रेण्डिङमा भारतीय टेलिसिरियल ‘सिलसिला बदल्ते रिश्तोका’ को मार्च २६ को भाग छ । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा यो भागलाई ५ लाख ४० हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । सिरियललाई आईकिङ क्र्याक नामक युट्युब च्यानलले अपलोड गरेको हो । यो कपि भर्सन हो । भिडियोमा ५ हजारभन्दा बढी लाईक गरिएका छन् ।
यी हुन् तामाङ चलचित्र महोत्सवमा देखाइएका ५ तामाङ चलचित्रहरु
काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाको भकुण्डेबेसीमा वि.सं. २०७५ चैत २९ गतेदेखि बैशाख १ गतेसम्म तेस्रो तामाङ चलचित्र महोत्सवमा देखाईने ५ तामाङ भाषाका चलचित्रहरु छनौट गरिएका थिए । । छनौट भएका चलचित्रहरुमा श्होङ, सेमरिन मुला माया, आप्लेङला नाम्सा, रुङ्सी टिला र सेर्कु रहेका थिए । ।
१) सेमरिन मुला माया–तामाङ सँस्कारमा स्वाँगेभाई हुने परम्परामा आधारित चलचित्र सेमरिन मुला माया चर्चित तामाङ चलचित्रहरुमध्येको एक हो । सेमरिन मुला मायालाई चैत २९ गते दिउँसो साढे १२ बजे महोत्सवस्थलमा प्रदर्शन गरिएको थियो । चलचित्रलाई यस अघि सर्लाहीमा प्रिमियर शो पश्चात काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न हलहरुमा प्रदर्शन गरिएको थियो । विभिन्न शो सँगै माउथ पब्लिसिटीका कारण चलचित्रले थप चर्चा पाएको छ । नायक सविन श्रेष्ठको समेत विशेष भूमिका रहेको चलचित्रमा हुत्त सञ्जय लामा, खुशी घिसिङ, संगीता दोङ, भिम तामाङ, राजु झक्कास वाईबा, कमल लोप्चन, कमल योञ्जन लगायतको अभिनय रहेको छ । साथै बाल कलाकार निमा दोङ, रुचिका गोले र निक्की दोङको समेत अभिनय चलचित्रमा छ ।
२) श्होङ–तामाङ कथानक चलचित्र ‘श्होङ’ तामाङ समुदायको ल्हाप्साङकार्पो क्षेत्रको तामाङ भाषा, सँस्कृति र लोक जीवनशैलीमा आधारित छ । चलचित्रलाई चैत्र ३० गते बिहान ९ बजे महोत्सवस्थलमा प्रर्दशन गरिएको थियो । । चलचत्रिमा एन्जिला वाईबा, मर्नेन तामाङ, कान्छा लामा, रुपा एस घले, आरम्भ तामाङ, सिंगबहादुर तामाङ, गोम्बो घले, बिकल लामा, ए.आर तामाङ, वाङ्जु वाईबा, कुशल थिङ, संगम ज्याक्सन, फुर्बा तामाङ लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । रोशन फ्युबा तामाङको निर्देशन तथा सिंगबहादुर तामाङको कथा र संवाद रहेको चलचित्रलाई प्रेम तामाङ र अनमोल तामाङले निर्माण गरेका हुन् । प्रकाश तामाङको छायाँकन हेर्न सकिने चलचित्रमा पेमा टाशीले ड्रोन चलाएका छन् । चलचित्रलाई नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको साल्मे तथा भल्छे क्षेत्रमा छायाँकन गरिएको बताइएको छ ।
सिंगबहादुर तामाङकै कोरियोग्राफी रहेको चलचित्रलाई रोशन फ्युबाले सम्पादन गरेका हुन् । चलचित्रको पोष्ट प्रोडक्सनको जिम्मा ल्हाप्साङकार्पो म्यूजिकले लिएको छ । चलचित्रका गीतहरुमा निर्मला घिसिङ, जितु लोप्चन, मनोज लोप्चन, मनमाया वाईबा र सुरेश लामाको अवाज सुन्न सकिन्छ । सिंगबहादुर तामाङ र जमुना तामाङको शब्द रहेको गीतहरुलाई रोशन फ्युबाले संगीत दिएका छन् । चलचित्रका गीतलाई रिकेश गुरुङ, पवन वाङ र जोगलाल लामाले एरेञ्ज गरेका हुन् । यस अघि नै तामाङ कथानक चलचित्र ‘श्होङ’ को ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ । चलचित्रको ट्रेलरमा द्वन्द र प्रेमलाई समावेश गरिएको छ । कथा र संवादका साथै ट्रेलरमा समावेश गीतहरु समेत चर्चामा रहेका कारण चलचित्रले सफलता पाउने निश्चित भएको निर्माण पक्षको दाबी छ । ल्हाप्साङकार्पो म्यूजिकको अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको ४ मिनेट ६ सेकेण्ड लामो ट्रेलरमा अधिकांश मुख्य कलाकारहरुको अभिनय समेटिएको छ । चलचित्रका चर्चित गीतहरुलाई समेत ट्रेलरमा स्थान दिइएको छ । तामाङ पत्रकारितामा ‘कुकुर कविता’ शिर्षकमा व्यङ्ग्य कविता लेखेर चर्चामा आएका नव कलाकार तथा साहित्यकार वाङ्जु वाईबाको अभिनय पनि ट्रेलरबाटै देख्न सकिन्छ । यस अघि नै चलचित्रको टिजरलाई डिसेम्बर २३ तारिखमा युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । नायिका एन्जिला वाईबाको जन्मदिनको अवसर पारेर चलचित्र युनिटले श्होङको पहिलो गीत समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । ‘ङ्याङ्ला माया’ बोलको उक्त गीतमा चर्चित गायिका जितु लोप्चन र गायक मनोज लोप्चनको आवाज सुन्न सकिन्छ । गीतमा सिंगबहादुर तामाङ र एन्जिला वाईबालाई फिचरिङ गरिएको छ ।
३) सेर्कु–तामाङ कथानक चलचित्र ‘सेर्कु’लाई बैशाख १ गते शनिबार बिहान १० बजे प्रदर्शन गरिएको थियो । तामाङ कथानक चलिचत्रको ईतिहासमै पहिलो पटक ‘युनिभर्सल सर्टिफिकेट’ प्राप्त गर्दै तामाङ कथानक चलचित्र ‘सेर्कु’ले ईतिहास रच्न सफल भएको थियो । चलचित्रमा चाँदनी मोक्तान, ऋतुराज पाख्रिन, सुष्मा मोक्तान, सुष्मा थिङ, विकास स्याङ्तान, उर्मिला वाईबा, श्यामलाल योञ्जन, बैरागी मोक्तान, मुस्कान तामाङ, योगेश मोक्तान, किरण तामाङ, गोपीराम तामाङ र निमादावा रुम्बा लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । चर्चित नायिका चाँदनी मोक्तान लामो समयपछि चलचित्र क्षेत्रमा यसै चलचित्रमार्फत कमब्याक गरेकी हुन् ।
राजकुमार मोक्तानको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रमा ऋतुराज पाख्रिनको कथा, पटकथा रहेको छ । रोशन फ्युबा तामाङको कोरियोग्राफी रहेको चलचित्रलाई राजकुमार मोक्तान र सिदार्थ मोक्तानले निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रमा पवन वाङको ब्याकग्राउण्ड स्कोर रहेको छ । चलचित्रका गीतहरु जीवन बोम्जन र राजकुमार मोक्तानले लेखेका हुन् । गीतमा आर.बी. लामा सिङ्दान र राजकुमार मोक्तानको संगीत रहेको छ भने अमृत लामा, जितु लोप्चन र आर.बी. लामा सिङ्दानले गीतमा आवाज दिएका छन् ।
४) रुङ्सी टिला–ह्याङ्ला मकवापनुर फिल्म्स प्रालिको प्रस्तुति तामाङ कथानक चलचित्र ‘रुङ्सी टिला’ लाई चैत ३० गते शुक्रबार बिहान ११ बजे प्रदर्शन गरिएको थियो । तामाङ चलचित्रका क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी समय चर्चामा रही कार्य गरेका मकवानपुरका चर्चित कलाकार एवम् निर्देशक बाबु थिङको निर्देशनमा चलचित्र निर्माण गरिएको हो । निर्देशक थिङले चलचित्रमा पारिवारिक कथा रहेको बताएका छन् । चलचित्रमा सौतेनी आमाको सम्बन्ध र पर्खाईमा रहेको प्रेमीको कथा समेत रहेको बताइएको छ ।
हेटौँडाका युवा व्यवसायी तथा समाजसेवी सानु लामाले यसै चलचित्रमार्फत नायकका रुपमा डेब्यू गरेका छन् । उनले एक समाज सुधारको बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्ने शिक्षकको भूमिका निभाएको बताइएको छ । चलचित्रमा मकवानपुरको चर्चित पर्यटकीय स्थलहरु मकवानपुरगढी, पुष्पलाल स्मृति पार्क लगायतका स्थानमा छायांकन गरिएको चलचित्रमा मकवानपुरकै कलाकारहरुको वर्चश्व रहेको छ । चलचित्रमा मकवानपुरका नायक सानु लामा, विक्रम लुङ्वा, सुष्मा थिङ, काभ्रेकी सुनिता लुङ्वा, राजु नेगी, राधिका स्याङ्तान लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । चलचित्रको कथा ऋतुराज पाख्रिनले लेखेका हुन् । बाबु थिङ र विक्रम लुङ्वाको कोरियोग्राफी रहेको चलचित्रमा राजु किराँतको द्वन्द रहेको छ । चलचित्रका गीतहरुमा देवलाल मोक्तान र सुशिल मोक्तानले संगीत दिएका छन् । चलचित्रलाई राधिका स्याङ्तानले निर्माण गरेका हुन् ।
५) आप्लेङला नाम्सा–तामाङ कथानक चलचित्र ‘आप्लेङला नाम्सा’ (मितबाको गाउँ) तामाङ परम्परा र रितिथितीमा आधारित छ । चलचित्रलाई चैत २९ गते दिउँसो ३ बजे महोत्सवस्थलमा प्रदर्शन गरिएको थियो । परम्परातर्फको यात्राका रुपमा ब्याख्या गरिएको चलचित्रलाई अजय स्याङ्तानले निर्देशन गरेका हुन् । छेम्बेल ह्योल्मोको निर्माणमा बनेको चलचित्रको कथा लेखन दोर्जे तामाङले गरेका छन् । चन्द्र कुमार दोङको संगितमा तयार भएका गीतहरुमा शशिकला मोक्तान, निर्मला घिसिङ, मिन कुमार दोङ र चन्द्रकुमार दोङको आवाज सुन्न सकिन्छ । राजु किराँतीको द्वन्द निर्देशन रहेको चलचित्रमा चक्र महर्जनको छायाँकन रहेको छ ।
चलचित्रको चु नाम्सा, मायाला धिमनाम सोगे, ताम्बासे ताम्सुर आरब्साम लगायतका गीतहरु चर्चामा छन् । चलचित्रमा प्रेम तामाङ, छेम्बेल ह्याल्मो, बुईसाल लामा, कान्छीमाया ह्योल्मो, बद्रि थिङ, सञ्जु केसी, प्रेम ग्याल्बो ह्योल्मो लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
‘हाम्रो कला हाम्रो पन, तामाङ चलचित्र हाम्रो पहिचान’ भन्ने मुल नाराका साथ हुने तेस्रो तामाङ महोत्सवमा २०७० सालपछि निर्माण भएका ५ वटा तामाङ चलचित्रहरु प्रदर्शन गरिने छ । प्रदर्शन गरिने ५ चलचित्रमध्ये उत्कृष्ट एक चलचित्रलाई नगद सहित सम्मान गरिने समेत बताइएको छ । त्यस्तै तामाङ चलचित्रका विभिन्न विधाहरुमा विशेष योगदान दिएका व्यक्तीहरुलाई समेत महोत्सवका समयमा सम्मान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अहिले यो संसारमा जिवित छैनन् तर उनले जिवन्त अभिनय गरेका चलचित्रहरुले उनी यो संसारमा बाँचिरहेकै आभाष गराउँछ । उनको अभिनय र चलचित्रमा उनले निभाएका पात्रहरु युगौँयुगसम्म चलचित्रको कथामा बाँचिरहने छ । मिजासिला स्वभावका उनले जीवनमा त्यस्ता केही नकरात्मक टिप्पणी पाएनन् जसले उनको सम्झनालाई धमिलो बनाईदिओस् । असल स्वभावका कारण उनी धेरैको स्मृतिमा अझै छाईनै रहेका छन् । उनी वि.सं. २०२४ साल पुस १४ गते काठमाडौँको बागबजारमा जन्मिएका हुनु । उनका बुवा राधाकृष्ण श्रेष्ठ र आमा जगत कुमारी श्रेष्ठ हुन् । परिवारमा छैठौँ अर्थात कान्छो छोराका रुपमा जन्मिएका उनी सानैदेखि सुशिल र शान्त स्वभावका थिए । श्रीकृष्ण श्रेष्ठको मृत्यू वि.सं. २०७१ साउन २४ गते बोन क्यान्सरबाट भएको थियो । यद्यपी उनको मृत्यूको घोषणा भने साउन २५ गते बिहान मात्र गरिएको थियो । लामो समयसम्म प्रेम सम्बन्धमा रहेकी नायिका श्वेता खड्कासँग विवाह गरेको करिब एक महिना पछि नै उनले श्वेतालाई एक्लै छाडेर गएका थिए ।
सानैदेखि नृत्यमा रुचि भएका उनले वि.सं. २०४५ सालमा चलचित्र भुमरीमा सानो रोल पाएका थिए । त्यसपछि ‘कसम’ चलचित्रमा सहनायकका रुपमा खेलेका उनले पहिलोपटक वि.सं. २०५१ मा विश्व बस्नेत निर्देशित ‘नाता’ चलचित्रबाट नायकका रुपमा अभिनय गरेका थिए । चलचित्र ‘नाता’ सँगै करिब सयभन्दा बढी सिनेमा खेलेका श्रीकृष्णका धेरै चलचित्र बक्स अफिसमा सुपरहिट भएका थिए । उनको अन्तिम चलचित्र ‘कोहिनुर’ सुपर डुपर हिट भएको थियो । उनले आफन्त, आफ्नो मान्छे, ए मेरो हजुर, हामी तीन भाइ, सुख–दुःख, कहाँ भेटिएला, कोहिनुर लगायतका सुपरहिट चलचित्रहरुमा अभिनय गरेका थिए । वि.सं. २०७१ असार २३ गते अभिनेत्री श्वेता खड्कालाई जीवनसंगीनीका रुपमा पाएका थिए । हनिमुनका समयमा बिरामी भएपछि उपचारका लागि भारतको दिल्लीस्थित अस्पतालमा भर्ना भएका उनको निधन भएको थियो । त्यही साता उनको होम प्रोडक्सनको चलचित्र कोहिनूर रिलिज भएको थियो । सबैका प्रिय नायक बनेका श्रीकृष्णको मृत्यूमा आहत भएका दर्शकहरुले उनको अन्तिम निशानीका रुपमा चलचित्र कोहिनुरलाई लिए जसका कारण हलमा दर्शकको ओईरो लाग्यो । नेपाली चलचित्रको इतिहासमै चलचित्र कोहिनुर करिब १० करोड रुपैयाँ कमाउने पहिलो र हालसम्मकै एकमात्र चलचित्रको रुपमा रहन सफल भएको छ । उनका कयौँ सुपरहिट चलचित्रहरुमध्ये यस भिडियोमा उनका हेर्नैपर्ने ५ चलचित्रहरुका बारेमा चर्चा गरेका छौँ । हेरौँ भिडियो–
१) ए मेरो हजुर – नेपाली कथानक चलचित्र ‘ए मेरो हजुर’ श्रीकृष्ण श्रेष्ठका सुपरहिट चलचित्रहरु मध्येको एक चलचित्र हो । गरिब परिवारमा जन्मिएका ‘अभिषेक’ पात्रका रुपमा चलचित्रमा देखिएका श्रीकृष्णको यो चलचित्रले पारिवारिक प्रेमको महत्व र पारिवारिक अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गरेको छ । यस चलचित्रमा नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँगै नायिका झरना थापा, गणेश उप्रेती, किरण केसी लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
चलचित्रलाई शिव रेग्मीले लेखन र निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रलाई सुनिल कुमार थापाले निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रको टाईटल गीतसहित अन्य गीतहरु पनि चर्चित छन् । चलचित्रलाई शम्भु सापकोटाले खिचेका हुन् । यो चलचित्र यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा युट्युबमा उपलब्ध छ । यस चलचित्रलाई अहिलेसम्म ९ लाख ५७ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । चलचित्रमा ५ हजारभन्दा बढी लाईकहरु गरिएका छन् ।
२) सुख–दुःख – स्वर्गीय श्रीकृष्णको अर्को सुपरहिट चलचित्र हो ‘सुख–दुःख’ । बुढेसकाल लागेका आफ्ना आमाबुवालाई वृद्धाश्रममा राख्ने अनि आफुखुशी भड्किलो जिन्दगी जिउनेहरुकाबिच रुमल्लिएको पारिवारिक सम्बन्धमा आधारित चलचित्र हो ‘सुख–दुःख’ । चलचित्रमा श्रीकृष्ण हजुरबुवा र हजुरआमालाई माया गर्ने नातिको रोलमा छन् । पारिवारिक पृष्ठभूमिसँगै सुरु भएको चलचित्रले जिन्दगीलाई सुख–दुःखको समिश्रणका रुपमा ब्याख्या गरेको छ । चलचित्र मुलतः तिन पुस्ताको कथा वरिपरि घुमेको छ । चलचित्रलाई स्वर्गीय शिव रेग्मीले नै लेखन र निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा स्वर्गीय श्रीकृष्णसँगै चर्चित कलाकारहरु मदनकृष्ण श्रेष्ठ, मिथिला शर्मा, झरना थापा लगायका कलाकारहरु रहेका छन् । यस चलचित्रका गीतहरु पनि सर्वाधिक रुचाइएका थिए । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा यो चलचित्र युट्युबमा उपलब्ध छ । चलचित्रलाई २९ लाख ३४ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । चलचित्रमा ८ हजार ५ सयभन्दा बढी लाईक गरिएका छन् ।
३) जिवन रेखा – चलचित्र ‘जीवन रेखा’ नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको चर्चित चलचित्रहरुमध्ये एक हो । चलचित्र मुलतः पारिवारिक प्रेममा आधारित छ । चलचित्रमा उनी आज्ञाकारी सन्तानको भूमिका छन् । आमाबुवाको आफ्ना सन्तानप्रतिको प्रेम र अभिभावकत्व अनि सन्तानको आमाबुवा प्रतिको जिम्मेवारीलाई चलचित्रमा निकै कलात्मक र मार्मिक ढङ्गले तयार पारिएको छ । चलचित्रमा श्रीकृष्णसँगै चर्चित कलाकार निर शाह, विपना थापा, सुनिल थापा, रेखा थापा लगायतको अभिनय रहेको छ । दिर्घ गुरुङको छायाँकन रहेको चलचित्रलाई सुरज सुब्बा नाल्बोले लेखेका हुन् । चलचित्रलाई प्रतिदप श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा यस चलचित्रलाई युट्युबमा हेर्न सकिन्छ । यस चलचित्रलाई यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा ५ लाख २ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । चलचित्रमा करिब १ हजार ४ सयभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।
४) पाहुना – नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको चर्चित चलचित्रहरुमध्ये ‘पाहुना’ एक जीवनको महत्व दर्शाउने चलचित्र हो । वादी समुदायको समेत थोरै कथा समेटिएको चलचित्रमा उनी एक गायका रुपमा देखिएका छन् । चलचित्रले हामी यस संसारका पाहुना मात्र हौँ, एकदिन सबैले संसार छोड्नैपर्छ त्यसैले सबैलाई माया गर्नु जरुरी छ भन्ने कुराहरुलाई जोड दिन्छ । चलचित्रमा श्रीकृष्णसँगै करिश्मा मानन्धर, दिलिप रायमाझी, झरना थापा, केशव भट्टराई लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । शिव रेग्मीको लेखन निर्देशनमा बनेको चलचित्रका गीतहरु समेत चर्चित छन् । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा यो चलचित्र युट्युबमा उपलब्ध छ । यस चलचित्रलाई ५ लाख १३ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । चलचित्रमा २ हजारभन्दा बढी लाईक गरिएका छन् ।
५) कोहिनुर – चलचित्र ‘कोहिनुर’ स्वर्गीय नायक श्रीकृष्णको अन्तिम चलचित्र हो । उनको मृत्यूको समयमा प्रदर्शनमा आएको यस चलचित्रले त्यस समय नेपाली चलचित्रको ईतिहासमै सर्वाधिक रेकर्डहरु तोडेको थियो । यस चलचित्रमा उनी आफ्नी जीवनसाथी नायिका श्वेता खड्कासँगै देखिएका थिए । यस अघि उनीहरुको श्रीमान श्रीमती र कहाँ भेटिएला जस्ता चर्चित चलचित्र प्रदर्शन भएको थियो । कोहिनुरमा श्रीकृष्ण एक यस्ता युवाको भूमिकामा देखिएका छन् जसले चेलिबेटी बेचबिखनको जालोलाई तोडिदिन्छन् । नेपालबाट भारतको कोठीमा पुराइएका चेलीहरुको कथा समेटिएको चलचित्रमा श्रीकृष्ण र श्वेतासँगै मिथिला शर्मा, सम्राट सापकोटा लगायतका कलाकारहरुले अभिनय गरेका छन् । आकाश अधिकारीको कथा र निर्देशनमा बनेको चलचित्रका गितहरु समेत सुपरहिट छन् । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा चलचित्रलाई २८ लाख ७८ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । चलचित्रमा १२ हजारभन्दा बढी लाईक गरिएका छन् ।
स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठका यहाँ उल्लेखित ५ चलचित्रहरुको लिंक भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा राखिएका छन् । तपाईले चाहेको समयमा हेर्नसक्नुहुनेछ । यस बाहेक पनि नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठका हामी तिन भाइ, पाहुना, अजम्बरी नाता, आफन्त, आफ्नो मान्छे, प्रेमयुद्ध, बरपिपल, गोर्खाली लगायतका थुप्रै चर्चित चलचित्रहरु रहेका छन् । तपाईले ती चलचित्रहरुलाई पनि युट्युब मार्फत खोजेर हेर्नसक्नुहुन्छ । तपाईलाई यो सामाग्री कस्तो लाग्यो । राम्रो लागेमा लाईक, कमेन्ट र शेयर गरेर सहयोग गरिदिनुहोला । साथै यस्तै अन्य भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्न नभुल्नुहोला ।